Mpampihorohoro sy ny autokrasia | safidy
Faly izahay mijery miaraka amin'ny horohoro amin'izany toy ny any Hongria, na i Polone dia hanimba ny foto-kevitra demokratika ary hanondraka ny ranon'ny fiarahamonim-pirenena. Fa ny fironana maha-mpanoratra any Aotrisy sy Eropa?
ny Veronika Janyrova 22. Septambra 2019, 8: 00 7k Views
"Hitantsika any amin'ny firenena maro izay misy ny lalàna fampihorohoroana be dia be: ny mpitsikera dia mampihorohoro, mikapoka na migadra."
Annemarie Schlack, Amnesty Int.
2018 dia nandeha endri-javatra demokratika hatreto dia be tahiry. Tamin'ny fiandohan'ny taona, dia gaga ny governemanta - betsaka na kely kokoa - miaraka amin'ny andiany vaovao amin'ilay "fonosana fiarovana" izay nitarika fitsikerana mavesatra tamin'ny taon-dasa. Ny rehetra, ny fanehoan-kevitra 9.000 dia navoakan'ny olom-pirenena, ny ONG ary ny manampahefana ampahibemaso - mihoatra ny teo aloha noho ny lalàna iray. Ny fototry ny fanitsiana ny "hetsika mahomby amin'ny ady atao amin'ny heloka bevava sy ny fampihorohoroana", araka ny nasongadin'ny antoko tao amin'ny governemanta, dia ny fampiasana rindrambaiko fitsikilovana (Bundestrojaner).
Azon'ny fanjakana ankehitriny ny miditra amin'ny angon-drakitra rehetra sy ny fiasan'ny telefaona sy solosaina - ohatra amin'ny alàlan'ny WhatsApp, Skype, na ny "rahona" manokana. Tadidio fa mitaky baiko azon'ny mpampanoa lalàna sy ny faneken'ny fitsarana izany. Indraindray, tamin'io fotoana io, dia nihanalefaka ihany ny tsiambaratelon'ny fifanarahana, nampiditra ny fitazonana ny data (mifandraika amin'ny hetsika) ary nanamafy ny fanaraha-maso ny horonantsary any amin'ny habakabaka. Ny mpanohitra sy ny ONG marobe dia mahita izany ho tsy fitsabahana tsy mitovy hevitra amin'ny zo fototra sy ny fahalalahana, izay nampitandrina ny fanararaotana ary nilaza ny "fanjakana fanaraha-maso".
Tsy mahagaga raha ny fanavaozana ny lalàmpanorenana ankehitriny, izay azon'ny distrika fitsarana amin'ny hoavy dia ho faritanin'ny governemanta federaly amin'ny alàlan'ny lalàna. Hatreto dia takiana ny fankatoavana ny fanjakana federaly sy ny fampiharana ny lalàna federaly ho fanarenana ireo raharaha fitsarana. Ny fikambanan'ny mpitsara Australiana dia mahita ny ao ambadiky ny fanovana ity "fanelanelanana goavana amin'ny fahaleovantenan'ny fitsarana (ary tsy azo ialana) ary eo koa ny fitantanana ny lalàn'i Aotrisy".
Ny fahalalahana haino aman-jery dia sarotra tokoa amin'ny tsy firaharahiana. Ankoatra ny fifantohan'ny media sy ekipa mpanonta ara-bola be dia be, ny ORF dia niharan'ny fanafihana politika maro hatramin'ny fiandohan'ny taona. Rehefa dinihina tokoa, izany no nahatonga ny olona 45.000 hanao sonia antso avo amin'ny fikambanana "hitsangana!" Ho fanoherana ny firehana ara-politika ORF.
Ny politikam-pifindra-monina dia tena mendrika ny azy manokana. Na izany aza dia tokony horesahina eto fa nanapa-kevitra ny Filankevitra Nasionaly tamin'ny volana Jolay fa hanamafy bebe kokoa ny lalàna ho an'ny vahiny, izay mamela ny polisy hiditra finday sy vola amin'ny mpitsoa-ponenana. Ankoatr'izay, nohafohezina ny fotoam-pifandraisana, nohafohezina ny fanampiana ho an'ny taranja Alemanina ary ny toro-lalana ara-dalàna ho an'ireo nangataka fialokalofana dia novaina tamin'ny fireneny. Izy io no 2005 hatramin'ny 17. Fanitsiana ny lalàna amin'ny vahiny.
Fiarahamonim-pirenena namorona mpampihorohoro
Ny famafana nomanina ny andalana 278c Abs.3 StGB dia nahatonga fikorontanana nahatratra. Andalana iray amin'ny hetsika mpampihorohoro momba ny asa fampihorohoroana izay misaraka mazava amin'ny fiaraha-monina sivika ho an'ny fifandraisana demokratika sy ny lalàmpanorenana, ary koa ny zon'olombelona. Ny famafana dia midika izany, ohatra, ny demokrasia sy ny zon'olombelona dia mety ho voasokajy ara-pitsarana ho mpampihorohoro ary voasazy ihany koa. Ny tena mahafaly an'io raharaha io dia ny tsy faneken'ny governemanta tamin'ny farany ny delestazy noho ny fanoherana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, ny akademia ary ny mpanohitra. Ny Amnesty International Austria dia manisa - ankoatry ny demokrasia bebe kokoa !, Alliance for Non-Profit, Economie Ara-tsosialy any Aotrisy ary Eco-Office - amin'ireo ONG ireo, izay nanaraka ny fanavaozana ny lalàna momba ny heloka bevava tamin'ny masom-borona. Ny talen'ny mpitantana Annemarie Schlack dia mampatsiahy ny fironana autokratika any amin'ny firenen-kafa: "Hitantsika any amin'ny firenena maro izay mety hitarika ny lalàna momba ny fampihorohoroana: ny mpitsikera dia mampihorohoro, mikapoka na migadra. Ho voaro mafy tokoa ny fiarovana ireo mpiaro ny zon'olombelona any Aotrisy ".
Fijery any atsinanana
Ny fanjakana Visegrad dia mampiseho amintsika mazava hoe aiza no misy ny politika autokratika sy afovoany. Ny praiminisitra Hongariana Viktor Orban, ohatra, dia manao fanentanana tapa-kevitra hamelezana ireo ONG natao tamina zon'olombelona sy demaokrasia ary notohanan'ny avy any ivelany. Tamin'ny taon-dasa teo, taorian'ny alàlan'ny lalàna ny ONG Hongrianina hambara ny fanomezana avy any ivelany, dia nisy lalàna vaovao momba ny ONG tamin'ny volana jona, izay mitaky ny handoa 25 isan-jatony an'io vola io amin'ny fanjakana Hongria. Ankoatr'izay dia tsy maintsy mampahafantatra ny tenany ao anatin'ny boky navoakany ho toy ny "fikambanana mandray fanampiana vahiny". Ireo fepetra antsoina hoe "fiarovana ny mponina" dia voamarina amin'ny fomba ofisialy amin'ny alàlan'ny fikambanan'ny ONG ireto "hikarakara fifindra-monina" ary noho izany dia "te hanova tanteraka ny fiforonan'ny mponina Hongria".
Any Polonina koa, matetika ny governemanta dia tsy manaja ny lalàm-panorenana momba ny lalàm-panorenana sy ny zon'olombelona ary manandrana manao lalàna manohitra ny fahalalahana maneho hevitra sy fivoriambe. Ireo mpanao fihetsiketsehana milamina dia henjehina ary tsy misy fikambanan'olona tsy miankina amin'ny fanjakana. Saingy, taorian'ny sivy taona nitondran'ny governemanta sy ny ankamaroany ao amin'ny efi-trano roa dia toa nanala ny tombontsoany ireo antoko nifidy "Law and Justice" (PiS). Ny hatezerana noho ny fireharehana fahefana dia niteraka savorovoro teo amin'ny vahoaka ary toe-tsaina feno fahatokisana tao anatin'ny fiarahamonim-pirenena tamin'ny taon-dasa. Ny fihetsiketsehana be dia be no nahatonga ny filoham-pirenena tamin'ny roa amin'ireo lalàna telo manohitra demokratika. Ankoatr'izay, nandritra ny fihetsiketsehana, ny orinasam-pifandraisana vaovao sy ny hetsika demaokratika dia noforonina izay tafiditra ao anaty sehatra iraisana.
Nifoha ihany koa ny fiarahamonim-pirenena Slovaky taorian'ny nanaovan'i 2018 ilay mpanao gazety tamin'ny volana febroary Jan Kuciak novonoina. Vao nahita vao misy tambajotra mpanao kolikoly izy izay nifanohana ireo solontenan'ny toekarena Slovaky, politika sy fahamarinana. Mafy ny olona misalasala fa novonoina i Kuciak noho ny fanambarana nataony. Ho valin'ny famonoana, dia tratry ny fihetsiketsehana tsy mbola nisy hatrizay ny firenena. Rehefa dinihina tokoa, dia niteraka ny fialan'ny lehiben'ny polisy, ny praiminisitra, ny minisitry ny atitany ary ny farany dia mpandimby azy izy.
Manoloana ireo olana ireo, tsy mahagaga raha ny tsy fahatomombanan'ny mponina Visegrad amin'ny fampandrosoana ny demokrasia nataony ary ny toe-draharaha ara-politika dia mbola tsy nisy teo amin'ny EU. Ny fandalinana iraisam-pirenena iray koa dia nandanjalanja ireo firenena voan'ny «aretin-tsaina miteraka” miparitaka manerana ny fiaraha-monina. Noho izany, na iza na iza amin'ny 74 isan-jaton'ny mponina no mino fa ny fahefana ao amin'ny fireneny dia mitoetra tanteraka eo am-pelatanan'ny mpanao politika, ary ny olona ambony amin'ny rafitra dia tsy misy heriny tanteraka. Maherin'ny antsasaky ny nanaiky ny fanambarana fa tsy misy dikany ny hanelingelina ny raharaham-politika ary tsy vitsy ihany no matahotra ny hilaza ny heviny. Ny fihetseham-po mibaribary fa ny demokrasia nataony dia marefo na ny very aza dia mampihena ny fanohanan'ny demokrasia ary manome lalana ny politikam-bahoaka sy ny anti-demokratika, hoy ny mpanoratra.
Raha tany Polonina sy Hongria, ny mponina dia nanohana tamin'ny fanohanana mahery vaika ho an'ny demokrasia, tany amin'ny Repoblika Czech sy Slovakia dia hita fa maniry mafy ilay "lehilahy matanjaka". Toy izany koa ny any Aotrisy. Raha teto amin'ity firenena ity, araka ny filazan'ny SORA Institute, ny 43 isan-jaton'ny mponina ankehitriny dia mihevitra "lehilahy matanjaka" hotadiavina, ao amin'ny Visegrad dia milaza fa ny 33 isan-jato fotsiny.
Ireo mpanoratra ny fandinihana SORA momba ny fahatsiarovan'ny Australiana ny demokrasia dia nanamarika ihany koa fa na dia nihena tokoa ny fanohanana ny demokrasia tany Aotrisy tao anatin'ny folo taona lasa, dia nitombo tokoa ny fanohanana "mpitarika matanjaka" ary "lalàna & filaminana". Tahaka izany koa, misy ny tsy fandriampahalemana ankapobeny ao anatin'ny vahoaka Australiana sy ny fahatsapan-tena fa tsy misy hilazany akory. Izao no namintina ny mpanoratra: "Ny avo kokoa ny tsy fahatokisana, dia matetika kokoa ny faniriana ho" lehilahy matanjaka "ho an'i Aotrisy."
Mpampihorohoro, inona izao?
Avy amin'ny fahatsapana sy ny taona fikarohana momba ny fifandraisana Australiana amin'ny demokrasia, ny talen'ny siantifika ao amin'ny SORA Institute Günther Ogris dia nanolotra tesis enina amin'ny fanamafisana ny demokrasia any Aotrisy. Ny fanabeazana, ny fahalalàna ara-tantara, ny kalitaon'ny andrim-panjakana ara-politika sy ny haino aman-jery, ny fahamarinana ara-tsosialy, saingy ny fanajana sy ny fankasitrahana ao anatin'ireo mponina koa dia manana anjara toerana lehibe amin'izany.
INFO: Ireo enina enina manaraka hanamafisana ny demokrasia ho an'ny adihevitra,
by Günther Ogris, www.sora.at
fanabeazana politika: Manana anjara toerana lehibe amin'ny demokrasia ny fampianarana. Ny sekoly dia afaka manamafy orina ny fifaninanana politika, izany hoe ny fahaizana mampahafantatra, mifanakalo hevitra ary mandray anjara. Io fiasa io dia zaraina ho faritra samihafa ary tokony hamafisina ho tanjona amin'ny fanavaozana fanabeazana mitohy.
fahatsapana ny tantara: Ny fifanandrinana sy ny fandinihana ny tantaran'ny olona iray dia manaporofo ny fanamafisana ny kolontsaina politika demokratika, ny fahaizana miatrika fifanolanana sy tsy fitoviana. Ity fanjonoana ity dia azo hararaotina amin'ny alàlan'ny fanamafisana bebe kokoa ny fampianarana ny tantaran'ny ankehitriny amin'ny sokajy sekoly rehetra.
Ivontoerana politika: Ny andrim-panjakana ara-politika sy ara-politika dia tsy maintsy manara-maso tsy tapaka sy hiverimberina ny fifandraisany amin'ny olom-pirenena: Aiza no misy sy ilaina hahamora ny fanamafisana na fanamafisana ny fandraisana anjara, aiza no ilaina hanatsarana ny endriny, aiza no handresena ny fitokisana (aoriana) ?
haino aman-jery: Ao anatin'ny krizy fahatokisan-tena ny fampitam-baovao, sy ny rafitra politika. Mandritra izany fotoana izany, ny fomba ampitan'ny fampahalalam-baovao momba ny politika, ny resaka ary ny fandefasana ny marimaritra iraisana, ary koa ny fifampiresahan'ny andrimpanjakana, dia misy fiantraikany lehibe amin'ny kolontsaina politika. Zava-dehibe ny famerenana sy hitadiavana fomba vaovao ho an'ny haino aman-jery mba hampiasa ny andraikiny sy hanavaozana ny fototry ny fahatokisana amin'ny asan'izy ireo, izay miasa amin'ny demokratika fotsiny.
Ny olom-pirenena: Tsy toy ny fialamboly, matetika no manahirana sy mandreraka ny politika. Fa amin'ny farany, miankina amin'ny olom-pirenena sy ny resadresaka momba ny fivoaran'ny demokrasia eto amintsika: ny fifaneraserana amin'ny governemanta sy ny mpanohitra, ny fanamarinana ary ny fifandanjana, ny fifandraisana eo amin'ny fitsarana sy ny mpanatanteraka, ny haino aman-jery ary ny politika, ny tsy fihoaram-peo ary ny fifanarahana.
Fitsarana ara-tsosialy, fankasitrahana ary fanajana: Ny fisolokiana, indrindra amin'ny fampitomboana ny tsy rariny amin'ny fiaraha-monina fa noho ny tsy fankasitrahana sy ny fifanajana, ny fampisehoana fikarohana, dia nisy fiatraikany ratsy teo amin'ny kolontsaina politika. Ireo olom-pirenena izay te hanohana sy hanamafy orina ny demokrasia dia izao ihany koa no miatrika ny fanontaniana hoe ahoana no hanamafisana ny fahamarinana ara-tsosialy, ny fanajana ary ny fanajana ao amin'ny fiaraha-monina.
Nosoratan'i Veronika Janyrova
Previous article Greta Thunberg: "Ny fizika lehibe indrindra dia fizika."
Lahatsoratra manaraka Ny milina goavam-be atao Scottish dia maniry ny hidika hidrogen avy amin'ny loharanom-panavaozana
Bebe kokoa avy amin'ny: Global
in asa, amin'izao fotoana izao, Vaovao momba ny ONG, Soisa, Videos
Iza amin'ireo tarika ireo no Beatles vaovao?
in politika, foiben'ny hery misintona
Mpanampy an'ny Google Humanoid | Amnesty Aleman
Mihamitombo ny fanafihan'ny governemanta amin'ny fiarahamonim-pirenena | Amnesty Aleman
Ny tsiambaratelo lasa nivadika 70. Saingy nahavonjy anao ny fanjakana. | Amnesty Aleman
Hongria: Avoahy i Ahmed H! | Amnesty Aleman
Fahafinaretana mahandro PUR III - dikany sy fahaizana | 20 fa tsy 33 Euro
HAARMONIE Naturfrisor dia efa 1985 nataon'ireo rahalahy mpisava lalana Ullrich Untermaurer sy Ingo Vall ...
Schau auf di - BIOkosmetik voatazona tanana
Aingam-panahy ny zava-boahary - Jereo ny Di - Solika vita amin'ny tarehy vita any an-trano any Aotrisy any afovoan'ny ala ...
Box boat & Bosch
Ultrabio sy manome sakafo be dia be - ireto ny shampoos, wicks hair ary Co. avy amin'i Kastenbein & Bosch ...
Mihetsiketsika maharitra miaraka amin'ny ISOVER Austria
Saint-Gobain ISOVER i Aotrisy no manam-pahaizana momba ny fitrandrahana miaraka amin'ny vokatra isan-karazany lehibe indrindra ho an'ny rehetra-boribory ...
"Efa ela aho no nanana olana tamin'ny hena, ka naniry ny hamorona vokatra manapaka hena aho ...
Greta Thunberg: "Ny fizika lehibe indrindra dia fizika."
Ny milina goavam-be atao Scottish dia maniry ny hidika hidrogen avy amin'ny loharanom-panavaozana